Omunye owadingiswa wase-Rwanda ubulewe eNingizimu Afrika | Scrolla Izindaba
Omunye owadingiswa wase-Rwanda ubulewe eNingizimu Afrika
Isishoshovu sezombusazwe sase-Rwanda nobengusomabhizinisi uSeif Bamporiki udutshulwe wabulawa eNyanga, eKapa ngeSonto ntambama.
Abasolwa bathathe omakhalekhukhwini kanye nezikhwama zemali ngaphambi kokuba babaleke endaweni yesigameko.
Amaphoyisa ase-Western Cape athi akholelwa ekutheni ukubulawa kukaSeif Bamporiki bekuwukuphanga.
Kodwa-ke, baningi abaphikisi bezepolitiki base-Rwanda bakaMengameli uPaul Kagame asebebulewe eNingizimu Afrika eminyakeni edlule.
UBamporiki wayengumxhumanisi we-Rwanda National Congress eNingizimu Afrika.
Ekhuluma nabakwa-Scrolla.Africa, okhulumela amaphoyisa ase-Western Cape uColonel uAndre Traut uthe izimo eziphathelene nokubulawa ziyaphenywa ngamaphoyisa aseGugulethu.
Uthe lesi sigameko senzeke ngeSonto ntambama ngezithuba zangabo-16: 20 e-Europa squatter camp.
UTraut uthe kusolakala ukuthi umufi nomunye wesilisa oneminyaka engama-50 bebehambise umbhede kule ndawo ngesikhathi kufika abasolwa ababili abangaziwa.
“Umufi wadonswa emotweni yakhe wadutshulwa, kwathi owesilisa oneminyaka engama-50 owayehamba naye wakwazi ukubaleka engenamyocu.
“Abasolwa abasazoboshwa babaleke nemoto kamufi futhi sikholelwa wukuthi imbangela yokubulala bekuwukuphanga,” kusho uColonel Traut.
UTraut utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi amaphoyisa aphenya icala lokubulala.
Ilokishi laseNyanga eKapa lingezinye zezindawo ezidume kakhulu ezinesibalo esiphezulu samacala okubulala ezweni.
Ezinye izishoshovu zase-Rwanda ezihlaselwe eNingizimu Afrika kubalwa kuzo:
● UCamir Nkurunziza, owayeyilungu le-Rwanda National Congress owayebaleke e-Rwanda ngemuva kokusebenza engunogada kaMengameli, naye wadutshulwa wabulawa eKapa ngowezi-2019
● Ngowezi-2013, omunye wabasunguli be-Rwanda National Congress, uPatrick Karegeya, wabulawa egumbini lakhe lasehhotela e-Sandton
● Umuntu ophikisayo, uKayumba Nyamwasa, wasinda emizamweni wokumbulala ngowezi-2010 eGoli.
Umthombo wesithombe: DailyMaverick